फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - नाउँ फेरिपाउँ
नाउँ फेरिपाउँ डा. खगेन्द्र लुइँटेल
ठाउँ उही, माउ उही, काम उही, दाम उही, हाम उही केवल हाम गर्ने दुईचार बच्चा फेर्नु अनि कको ठाउँमा खल्याउनु, कको सट्टा खको चाकडी गर्नु र कले गरिरहेको भोजनभट्ट खलाई हस्तान्तरण गर्नु नै लोकतन्त्रको नाउँ र परिभाषा हो भने प्रभु मलाई यस्तो लोकतन्त्रभन्दा ठोकतन्त्र नै भएपुग्छ । हिजोका प्रतिगामी भनिएकाहरू आज नाउँ फेर्ने्बित्तिकै घोर लोकतन्त्रवादी हुने र मजस्ता दीनदुखी जनताचाहिँ जहाँको तहीँ रहिरहने भए त्यस्तो परिवर्तन मलाई चाहिएन । यस्ता कुरा गरेबापत बरु मलाई प्रतिगामीमा नाउँ दर्ता गरी फाँसी दिए ढुक्क हुन्छ । राष्ट्रिय अस्मिता नै संकटग्रस्त भएपछि शान्तिको माला जपेर ज्योतिष हेराउँदै शासन लम्ब्याउनुको के अर्थ ? हिजोकाले देवीका नाउँमा बलि चढाउँदै देश भ्रमण गरे, माला थापे र राष्ट्रिय ढुकुटी सुकुटी पारे । आजका देवको नाउँ पुकारी उही रीतले विदेश भ्रमणमा मस्त रहे भने के फरक भयो र हिजो र आजमा ? सायद यो त लोकतन्त्र होइन होला ? शिशु छउन्जेल लोकतन्त्र पनि यस्तै चकचके हुन्छ कि त ?
अहिलेको नाउँ फेर्ने लहरमा प्रभु मेरो पनि नाउँ फेरिदिनु र्पयो । प्रतिगामी कालमा उन्नाईसअगि राखेको मेरो नाउँ तु. फेर्ने आका गरी घोषणा, अध्यादेश वा के ल्याउनु पर्छ ल्याइदिनु पर्यो । सर्वप्रथम मेरो नागरिकताको प्रमाणपत्र फेरिपाउँ । मेरो नागरिकतामा प्रतिगामीसँग जोडिएको नाउँ पशुपतिनाथ नेपाल छ । अब फेरेर बिहारीलाल नेपाल बनाइपाउँ । मेरी ठाहिँली श्रीमतीको नाउँ अहिले राजमती भारती छ । अब लोकमती नेपाली बनाइपाउँ । उताको नागरिकता यताको बनाइपाउँ । मैले नयाँ नागरिकता लिन यताउताका मिलाएर साक्षी तयार गरिसकेको छु । कतिले लिइसके अब म मात्र बाँकी छु । यसपछि त उता हुँदा उतैको, यता हुँदा यतैको, जताततैको । क्या मज्जा ।
यहां पढ्न नसकेर बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार भन्दै भित्रभित्रै लुकेर मित्रराष्ट्रतिर हान्निई ल्याएको एउटा सर्टि्फिकेटमा भएको नाउँ पनि परिवर्तन गरिदिनु पर्यो । नयाँ नागरिकतासँग मिल्ने गरी मेरा भएका शैक्षिक प्रमाणपत्रको नाउँ र श्रेणी पनि फेरिपाउँ । नयाँ नागरिकता अनुसार बिहारीलाल नेपालका नाउँमा मेरो पुरानो सर्टि्फिकेट नयाँ गरिपाउँ । पहिलेका प्रतिगामी कालमा दिइएको तृतीय श्रेणी अब प्रथम श्रेणीमा परिवर्तन गरिपाऊँ, प्रभु लोकनारायण नमः ।
दक्षिणायन इसाराबमोजिम मन्त्री बनी लोकतन्त्र जोगाउनाका लागि कम्मर कसेर रामनामी पीताम्बरका साथ अगि बढेको म अहिले नागरिक समाजको स्वघोषित अध्यक्ष बनिसकेको मान्छे । सर्टि्फिकेटको त खास काम छैन, तैपनि मलाई पुरानासँग घृणा भएकाले नै नयाँ नाउँ राखेर आफ्नो पहिचान बनाउने विचार गरेको हुँ । हाललाई मैले आफ्नो र श्रीमतीको पछिल्लो थरचाहिँ कायम राख्ने निधो गरेको छु । मेरो थर देशसँग अनि श्रीमतीको चाहिँ देशवासीसँग मिल्ने खालको भएकाले त्यो सुन्दा धेरै ठाउँ मान्छेहरू हाँस्ने गरेको पीडा छुट्टै छ । तैपनि योचाहिँ अहिलेलाई नफेरी कायमै राख्ने विचार छ । कुनै दिन सांसद् वा मन्त्री भएपछि सनक चढ्यो भने त्यो पनि फेर्न बेर लाउँदिन । त्यतिबेलासम्म नफुटे हामी आठै भाइ मिलेर निर्णय गरौँला । त्यो कामचाहिँ पछिको पहिलो बैठकसम्मका लागि थाती राखौँ ।
पुरानो संसदको नाउँ व्यवस्थापिका संसद् अनि सांसद्को नाउँ विधायक बनाएर ठूलै परिवर्तन गरिसकिएकै छ । अब भ्रष्टाचारको नाउँ दानदातव्य राखौँ, मन्त्रीको नाउँ हन्त्री राखौँ, मन्त्रालयको नाउँ घिचुवालय, विद्यालयको नाउँ सिध्यालय, विश्वविद्यालयको नाउँ भागबन्डालय, शौचालयको नाउँ ढुकुवालय( कुरुवालय, मुत्रालयको नाउँ झुत्रालय, एकेडेमीको नाउँ लाउके भर्तीकेन्द्र, राजदूतको नाउँ राँकेभूत, जिएमको नाउँ एमजी, सिडिओको नाउँ भिडियो बनाए हुन्छ । यस्तै पुलिसको नाउँ फुलिस‘ । सुरुमै संशोधनको सर्त राखेर पारित गर्ने र लागू हुन नपाउँदै वैयक्तिक सनकका आधारमा पलपलमा फेरबदल गरिरहने अन्तरिम संविधानलाई खन्तरिम साउनेधान राखिदिए हुन्छ । अहिलेका कालु पाँडे जति सेतु आँडे बनाइदिए हुन्छ । यस्तैयस्तै कसकसको केके फेर्ने भन्नेबारे सबै आठै ग्रह मिलेर एकरात बालुवाघाटमा छलफल गरौँला ।
हामीलाई ‘राज’ जोडिएका शब्दसँग सारै घृणा भएकाले त्यस्ता शब्द खोजीखोजी फेरौँ । नत्र हिजो तिनै संस्थाबाट ग्रहण गरेको भोजनभट्ट सम्बन्धी भेद खुल्न सक्छ यसैले यी काम रातारात गरौँ । राजधानीलाई लोकधानी, राजमार्गलाई लोकमार्ग, राजपथलाई लोकपथ, राजपत्रलाई लोकपत्र, राजदूतलाई लोकदूत, राजस्वलाई लोकस्व, राजालाई लोका, राज्यलाई लोक्य आदि तुरुन्तै गरौँ । यस्ता पुराना शब्द कोशमा पनि नराखौँ । मेरा ससुरा राजमानलाई लोकमान, मामाससुरा राजेन्द्रलाई लोकेन्द्र, काका हरिराजलाई हरिलोक अनि पुत्नेछोरो राजबहादुरलाई लोकबहादुर बनाइहालौँ । यिनका नागरिकता र सर्टि्फिकेट पनि फेरिदिऊँ । राजकीय शब्दलाई लोककीय बनाई नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई नेपाल लोककीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनाऔँ । यस्ता शुभकार्यमा पटक्कै ढिलो नगरौँ, तुरुन्ता तुरुन्ती गरिहालौँ ।
आजको नारीवादी युगमा पुरुषहरूलाई सारै गाली गरिसकियो । अब त्यहाँ पनि फेरौँ । नारीलाई आजैदेखि पुरुष र पुरुषलाई नारी भन्न थालौँ । त्यसो भए गालीसाली पनि कम, कामकाज शून्य । प्रतिशतको कुरा पनि बन्द । राजा फ्याँकौँ, रानी ल्याऔँ । राजालाई रानी बनाई नारीको सम्मान गरौँ । काम थालनीको तरखर भइसकेको छ । कानुन बनाइहालौँ । ढिलो नगरौँ ।
हरेकको नाउँ फेर्नका लागि एउटा शब्दकोश बनाउन थालौँ । छिटो गरौँ । त्यो काम पनि पुरानो एकेडेमीको ढुकुवा लिंडेपतिलाई वा लाउके भर्ती केन्द्रका नयाँ हवल्दारलाई जिम्मा दिऔँ । त्यसो गरेसि दुईचार लाउकेले जागिर पाउँछन् । त्यसमा विशेषज्ञताको कसी सदस्यता बनाऊँ । कसैको सदस्यता लिएका जति विशेषज्ञ नलिएका जति अल्पज्ञ‘ बस ।
उहिल्यै जङे सानाले पाँचलाई थर्काएर तीन जोडे । अहिलेका ज्ञानी ठान्ने बुद्धु्रहरूले वीर भनिने काँतरहरूको जरोबुटै उखेलेर ठूलै सिकार गरी पुरानो पाँचमा संशोधन गरे । सत्तामा पुगेपछि जोड्ने र फेर्ने क्रम पुरानै भए पनि अहिले फेर्ने काम अलि बढ्तै हुन थालेको छ । विश्वप्रसिद्ध पुराना नाउँहरू पनि प्रतिगामी भन्दै फेरिए । अहिले नेपालको नाउँ पनि ‘नयाँ नेपाल’ भएको छ । नया नेपाल भनेको तेईसे, चौबीसे, एकाउन्ने, बाउन्ने बनाउन खोजेको त होइन होला । यस नयाँको अभिप्राय अब भोजनभट्टको पालो पुरानाको होइन, नयाँको हो भन्ने मात्र भए त केही भन्नु छैन । नामले नभएर कामैले साँच्चै नयाँ भए त कुरा ठिकै छ ।
सडकका कुकुर बिरालाहरू सिंहदरबार छिर्ने्बित्तिकै आपसमा मित लगाएर भोजनभट्टमा जुटने चलन पनि उति नयाँ होइन । अब सिंहदरबारको नाउँ पनि पुरानिएकाले नयाँ नाउँ स्यालगुफा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । एक पुस्ता त के सात पुस्तासम्म मुद्दा टाँगिदिने र जनतालाई अनावश्यक दुख दिने कामको प्रकृति हेर्दा न्यायालयलाई खायालय र सर्वाेच्चको नाउँ सर्वनीच राख्नु बेस हुन्छ । उच्च पदासीनहरू जनताका माग एक हप्तामा पूरा हुने वचन दिन्छन् तर वर्षौं बितिसक्दा पनि पूरा हुँदैन । अब कति दिनको एक हप्ता हुन्छ भन्न पनि गारो भइसकेकाले हप्ता शब्दै पनि फेरिदिनु पर्यो ।
फेरानसम्बन्धी यी दुईचार प्रस्ताव मात्र हुन् । धेरैतिर धेरै थोक फेर्नु छ । यसका लागि म बिछट्टै सिपालु छु । भएको संरचना विनिर्माण गर्न र नाम फेर्न मलाई नाउँ फेरान आयोगको अदक्ष बनाएर केही समय मेरो बेरोजगारी हल गरिदिए मेरो मात्र होइन तपाईंहरूको पनि कल्याणै हुनेछ ।